ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Chen Hai အား လက်ခံတွေ့ဆုံ – Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Chen Hai အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ်လ (၉) ရက်
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်သည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Chen Hai အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ရာ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်အေးဟန်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Chen Hai က မြန်မာနိုင်ငံသည် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် နှင့် သဘာဝအလှအပများ ပေါကြွယ်ဝသောကြောင့် ခရီးသွားများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် ခရီးစဉ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအားမြှင့်တင်ရာတွင် ဝန်ကြီးဌာန၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်တိုးတက် အောင်မြင်လာသည်ကိုမြင်တွေ့ရပါကြောင်း၊ မိမိတို့သံရုံးအနေဖြင့်လည်း ပူးပေါင်းပံ့ပိုးပေးသွားလိုပါကြောင်း၊ ပုဂံဒေသကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူ ပါကြောင်း၊ လက်တလောတွင်လည်း ပုဂံရှိဘုရားများအား ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးပြုလုပ်သည့်နေရာတွင် သံရုံးမှပံ့ပိုးကူညီပေးနေပါကြောင်း၊ တိုးတက်ဝင်ရောက်လာမည့် တရုတ်ခရီးသွားများအတွက်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ထားရန်လိုအပ်ပြီး ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်မည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို လုပ်ဆောင်လိုပါကြောင်းနှင့် မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်လည်း ဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုတွင် တရုတ် ခရီးသွားများမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် သာမကအခြားသော ကဏ္ဍများတွင်လည်း တရုတ် နိုင်ငံ၏ ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုအား ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ တရုတ်ခရီးသွားများလာရောက်လည်ပတ်ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် လေဆိပ်များတွင် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် လမ်းညွှန်စာအုပ်များကိုတရုတ် ဘာသာဖြင့် ဖြန့်ဝေထားပါကြောင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကော်မတီ(၆)ရပ် ဖွဲ့စည်း ထားပြီး ၎င်းကော်မတီများအနက် တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအတွက် တရုတ်-မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီကိုလည်းဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ခရီးသည်များ အလုံးအရင်းလက်ခံရန် အခြေခံအဆောက်အဦ လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် များပြားလာမည့် တရုတ်ခရီးသွားများ အတွက် ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နေပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် ခရီးသည်များအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမှာ အဓိကဦးစားပေးမူဝါဒအဖြစ် လက်ကိုင်ထားပါကြောင်း ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လည်း တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုမြှင့်တင်လိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။